Procreate Brushes कसरी डाउनलोड गर्ने: Brushes डाउनलोड गर्न वेबसाइटहरू | अनलाइन क्रिएटिभहरू
यो महत्त्वपूर्ण छ कि यदि तपाइँ चित्रण वा ग्राफिक डिजाइनको संसारमा काम गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको परियोजनाहरु लाई धेरै कलात्मक बनाउन को लागी रचनात्मक र मौलिक ब्रश डाउनलोड गर्ने धेरै तरिकाहरु छन् भनेर जान्न इच्छुक हुनुहुनेछ।
यस कारणले गर्दा यो पोस्टमा, हामी तिनीहरूलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र सबै भन्दा माथि यो कहाँ गर्ने भनेर व्याख्या गर्न जाँदैछौं। त्यहाँ धेरै वेब पृष्ठहरू छन् जहाँ तपाइँ तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अतिरिक्त लागतको साथ प्रीमियम साइटहरू वा केवल पूर्ण रूपमा नि: शुल्क साइटहरू जहाँ तपाइँ यसले प्रदान गर्ने फाइदाहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं हामीले माथि उल्लेख गरेका सबै कुराको प्रेमी हुनुहुन्छ भने, यो नयाँ कलात्मक साहसिक कार्यको लागि तयार हुनुहोस् जुन आउन बाँकी छ।
1 Procreate भनेको के हो?
2 Procreate ब्रश कसरी डाउनलोड र स्थापना गर्ने
3 जहाँ ब्रश डाउनलोड गर्न
3.3 डिजाइन कटौती
4 ब्रश को प्रकार
4.1 सम्पूर्ण ब्रशहरू
4.2 डटेड ब्रश
4.3 सुलेखन ब्रश
4.4 बनावट ब्रश
4.5 हास्य ब्रश
Procreate भनेको के हो?
प्रोक्रिएट एउटा उपकरण हो जुन दृष्टान्त सफ्टवेयरको अंश हो र कार्य गर्दछ। इलस्ट्रेटरको विपरीत। Procreate सँग विभिन्न कुञ्जी उपकरणहरू छन् जुन अनलाइन पाठ्यक्रमहरूबाट अनन्त ब्रशहरूमा आउँछन् जसले चित्रको उत्कृष्ट प्रयोग र उपयोगितालाई अनुमति दिन्छ।
थप रूपमा, यो दुबै आईप्याडका लागि पनि उपलब्ध छ। सशुल्क एप्लिकेसन भए तापनि, यसले तपाइँलाई सम्भावित भेक्टर र ग्राफिक तत्वहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। मासिक लागत €9 देखि €0 सम्म भिन्न हुन्छ, किनकि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एक मूल्य हो जुन धेरै व्यापक वा महँगो छैन।
निस्सन्देह Procreate लाई चित्रकारहरूका लागि तारा उपकरणहरू मध्ये एक बनाउने सुविधाहरू मध्ये एक यसको ब्रशहरूको ठूलो सूची हो जुन यसले प्रस्ताव गर्दछ। यो यसको ब्रसले मात्र होइन तर यसको विभिन्न उपकरणहरूद्वारा पनि विशेषता हो जसले हामीलाई आफूले चाहेअनुसार एप्लिकेसन प्रयोग गर्दा हामीले सिर्जना गर्ने सबै चालहरू परिमार्जन गर्न मद्दत गर्छ।
Photoshop जस्तै, Procreate ले लेयरहरूसँग पनि काम गर्दछ, जसले कामको गतिशीलतालाई समान हुन अनुमति दिन्छ र यदि तपाइँ सामान्यतया आफ्नो कामको लागि Photoshop प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै ठूलो भिन्नता छैन।
यो निर्देशन गर्नको लागि सबैभन्दा सजिलो उपकरणहरू मध्ये एक हो, त्यसैले यसको सीपको स्तर धेरै उच्च छैन र यो पेन्सिल र माउस दुवैमा चित्रण गर्न सम्भव छ।
Procreate ब्रश कसरी डाउनलोड र स्थापना गर्ने
स्रोत: एन्ड्रो हल
अर्को हामी कसरी ब्रश डाउनलोड र स्थापना गर्ने भनेर व्याख्या गर्नेछौं। तपाईलाई आवश्यक पर्ने एक मात्र चीज हो कि निम्न स्रोतहरू छन्: प्रोक्रिएट (ब्रस) को लागि शानदार पेन्सिल। एकचोटि तपाईंले आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजरमा यसको खोजी गर्नुभयो र यसलाई डाउनलोड र स्थापना गर्नुभयो, तपाईं सुरु गर्न तयार हुनुहुनेछ।
ब्रश डाउनलोड गर्न तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ:
हामीले गर्न गइरहेको पहिलो कुरा खुला छ नयाँ क्यानभास र यसरी ब्रश प्यानल खोल्नको लागि ब्रश आइकन छुनुहोस्। हामी फोल्डर चयन गर्नेछौं जहाँ तपाइँ ब्रश स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईंले ब्रश सेट सूचीको शीर्ष बायाँमा रहेको + बटन ट्याप गरेर नयाँ फोल्डर सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ ब्रश आयात गर्न ब्रशहरूको सूची माथिको + बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
एकपटक हामीले फोल्डर सिर्जना गरेपछि हामी आयात बटन छुनेछौं माथिल्लो दाहिने कुनामा।
तपाईंको उपकरणको फाइल विन्डो त्यसपछि खुल्नेछ। फाइलहरू ड्राइभ, iCloud ड्राइभ वा तपाईंको ड्रपबक्सबाट फोल्डरहरूबाट आयात गर्न सकिन्छ। तपाईले आयात गर्न चाहनु भएको ब्रशमा ट्याप गर्नुहोस् र यो स्वचालित रूपमा तपाईले तपाइँको प्रोक्रिएट ब्रश भित्र रोजेको फोल्डरमा थपिनेछ।
ब्रश अनजिप गर्न जुन जिप फाइलहरू भित्र छन् तपाईंले FileExplorer वा फाइल प्रबन्धक भनिने नि: शुल्क अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकपटक हामीले एप्लिकेसन स्थापना गरेपछि, अनजिप गर्न र तपाईंको आईप्याडको फाइल विन्डोमा आयात गर्न एउटा विन्डो खुल्नेछ।
यदि तपाइँसँग MAC कम्प्युटर छ भने, तपाईं आफ्नो ब्रश फाइल अनजिप गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई AirDrop विन्डोमा तान्नुहोस्। ब्रशहरू प्राप्त गर्नको लागि तपाईंको आईप्याड सक्रिय देखिन्छ। तिनीहरूलाई तपाईंको आईप्याडको नाममा तान्दा प्रोक्रिएटमा ब्रश आयात हुनेछ।
जहाँ ब्रश डाउनलोड गर्न
Envato यो एक प्रकारको अनलाइन बजार हो जुन ठूलो संख्यामा लेखहरू समावेश गरिएको छ जस्तै: mockups, अनलाइन र अफलाइन विज्ञापन तत्व र मिडिया, आदि। यो हाल सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने एप्लिकेसनहरू मध्ये एक हो किनभने यसमा दैनिक4मिलियन भन्दा बढी डाउनलोडहरू छन्।
Gumroad डिजिटल सामग्री सिर्जना गर्नेहरूका लागि अनलाइन बजारहरू मध्ये अर्को एक हो। यो प्रसिद्ध उपकरण यो यसको सरल र नेभिगेट गर्न सजिलो मेनुको लागि धेरै भाइरल भएको छ र उत्पादनहरूको विविधताका लागि यसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रस्ताव गर्दछ।
डिजाइन कटहरू विश्वव्यापी रूपमा एक अनुप्रयोगको रूपमा चिनिन्छ जसका उत्पादनहरू विभिन्न कलाकारहरू र डिजाइनरहरूद्वारा हस्तशिल्प हुन्छन्। यो एक उपकरण हो जसले तपाईंलाई रेखाचित्र र एनिमेसनको कलात्मक क्षेत्र विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ। थप रूपमा तपाईंले फोटोशपको लागि उपलब्ध ब्रशहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
ब्रश को प्रकार
सम्पूर्ण ब्रशहरूले तिनीहरूको कार्यहरू गर्न सक्षम हुने विभिन्न प्रकारका कार्यहरूबाट तिनीहरूको नाम प्राप्त गर्दछ। ती मध्ये स्केचिंग छन्।
स्टिप्पल ब्रशहरू सामान्यतया ब्रशहरू हुन् जसको टिप धेरै विशेषता र उपयुक्त छ कि रेखाचित्र धेरै सरल र ह्यान्डल गर्न धेरै सजिलो छ।
क्यालिग्राफिक ब्रशहरू परियोजनाहरूका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ डिजाइन गरिएको थियो जसको टाइपोग्राफी नायक बन्छ। यस अवस्थामा, तिनीहरू प्रतिलिपि लेखक वा लेखकहरूको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको थियो।
बनावट ब्रशहरू पानी रङ, पेन्सिल, स्यान्डपेपर जस्ता सामग्रीहरूद्वारा निर्धारण गरिन्छ वा तिनीहरूमध्ये धेरैलाई तिनीहरूको विशेषता हुने आवाजद्वारा निर्धारण गरिन्छ।
यो पेन्सिलको दायरा मध्ये एक हो जसमा १२ सम्म फरक र सुपर उपयोगी ब्रशहरू छन्। यदि तपाईंलाई के चाहिन्छ भने शानदार र रचनात्मक फन्टहरू सिर्जना गर्न हो भने, यस प्रकारको पेन्सिल प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
कमिक ब्रशहरू सामान्यतया सबैभन्दा मौलिक ब्रशहरू हुन् किनभने तिनीहरूले युगको सानो भिन्टेज टचको साथ रेट्रो कमिक-जस्तै चित्रहरू कोर्ने र सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ।
सामान्यतया, तिनीहरूमा 12 ब्रशहरू हुन्छन् जुन सामान्यतया आईप्याडका लागि उपयुक्त हुन्छन् र पहिले प्रस्ताव गरिएका सुविधाहरू कायम राख्ने विभिन्न बनावटहरू पनि हुन्छन्।
यदि तपाईंलाई प्रोक्रिएट र यसको ब्रशहरूमा यो नयाँ किस्त मनपर्यो भने, हामी तपाईंलाई हामीले तपाईंको लागि डिजाइन गरेका अन्य धेरै पढ्न पनि सुझाव दिन्छौं।
तपाईले देख्नु भएको छ, त्यहाँ धेरै ब्रशहरू छन् जुन अनलाइन उपलब्ध छन्। तपाईंले हामीले पहिले उल्लेख गरेका केही प्याकेजहरू स्थापना गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूसँग चित्रण सुरु गर्नुहोस्।
अब तपाईको आफ्नै रेखाचित्रको नायक बन्ने पालो हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » Procreate ब्रश कसरी डाउनलोड गर्ने
डिज्नी लोगो को इतिहास
टाइपोग्राफी पहिचान गर्न उपकरणहरू